इटहरीमा पनि ५० श्ययाको सैनिक अस्पताल सञ्चालन,के-के छन् त सेवाहरु ? « Sansar News
इटहरीमा पनि ५० श्ययाको सैनिक अस्पताल सञ्चालन,के-के छन् त सेवाहरु ?
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १५:४३
१६ फागुन, इटहरी । इटहरीमा रहेको पूर्वी पृतनामा आधुनिक उपकरणसहितको ५० श्ययाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आज एक समारोहबीच अस्पतालको उद्घाटन गर्दै नेपाली सेनाका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आफन्त तथा परिवार स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएर काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि सेनाले अस्पताल निर्माण गरेको बताए ।
नेपाली सेनाको छाउनी अस्पतालले माग्यो डाक्टर, नर्स र कर्मचारी